प्रचण्ड माथि महेश बस्नेतको प्रहार – “फेसबुके प्रधानमन्त्री बन्नु भएकोमा हार्दिक बधाई” – Online Khabar 24
प्रचण्ड माथि महेश बस्नेतको प्रहार – “फेसबुके प्रधानमन्त्री बन्नु भएकोमा हार्दिक बधाई”
पाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) ओलीपक्षका नेता महेश बस्नेतले फेसबुके प्रधानमन्त्री बन्न लागेको भन्दै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बधाई दिएका छन्।
नेकपा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाउने निर्णय गरेपछि सामाजिक संजाल मार्फत टिप्पणी गर्दै नेता बस्नेतले प्रचण्डलाई फेसबुके प्रधानमन्त्री भन्दै बधाई दिएका हुन्। विघटित प्रतिनिधिसभाका केहि पूर्वसांसदहरुले प्रचण्डलाई संसदिय दलको नेता बनाएको बस्नेतको टिप्पणी छ।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका बस्नेतले अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नै नसक्ने पनि बताएका छन्। अब प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अवस्था नरहेकै कारण प्रचण्ड भित्ते राष्ट्रपतिबाट फेसबुके प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भन्ने भन्दै बस्नेतले व्यंग्य गरेका छन्।
नेता बस्नेतले प्रचण्डलाई नेपालमा छलाङ्ग, धक्का, क्रमभङ्ग, महावि पत्तिको सिद्धान्तका प्रत्युपादक समेत भनेका छन्। प्रचण्डको ०६४ सालको चुनाव अगाडि भावी कार्यकारी राष्ट्रपति भनेर आफूलाई प्रचार गराएपनि त्यो सफल हुन नसकेको पनि बस्नेतले फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन्।
“नेपालमा छलाङ्ग, धक्का, क्रमभङ्ग, महाविप त्तिको सिद्धान्तका प्रत्युपादक नेता क. प्रचण्डको ०६४ सालको चुनाव अगाडि भावी कार्यकारी राष्ट्रपति भनेर खुब वाल पेन्ट गराइयो फोटो टाँसियो। संविधान निर्माण गर्दा उहाँले त्यो अडान छोडनु भयो। अनि उहाँहरुले नै भन्ने गरेको बोकाको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने भनेको संसदीय व्यवस्थामा सम्झौता गर्नुभयो। अनि त्यो सबै नाटक साबित भयो र उहाँको नाम भित्ते राष्ट्रपति रहन गयो।”,बस्नेतले फेसबुकमा लेखेका छन्,”आज फेरि बिगठीत प्रतिनिध सभाको नेकपाको सिमित पुर्व सासंदहरुको संसदिय दलको नेता हुनु भएछ। अब कहिले बन्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीको अभिलाषा बोक्नुभएको क. प्रचण्ड अब भित्ते राष्ट्रपतिबाट फेसबुके प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का छ। हार्दिक बधाई छ।
Prevरमेशका साथीहरु एकै साथ आय मिडियामा,त्यो दिन यस्तो भएको रहेछ । घटनाको कारण भन्दै सजाय भो’ग्न तयार(भिडियो)
nextप्रधानमन्त्री अोली भन्नुहुन्छ“देश स्वर्ग बन्छ भने म नर्क जान तयार छु”